အဆိုပါဖိ Beta ကို Kappa Society က Matters အတွက်အဘယ်ကြောင့်အသင်းဝင်
phi Beta ကို Kappa ရှေးအကျဆုံးနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရှိဆုံးဂုဏ်သတင်းကြီးသောပညာရေးဂုဏ်အသရေလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မှာ 1776 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝီလျံနှင့်မာရိ၏ကောလိပ် ဖိ Beta ကို Kappa ယခု (ထိုတွေ့မြင် 286 ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များမှာအခန်းကြီးရှိပါတယ်, ဖိ Beta ကို Kappa အခန်းကြီးစာရင်း ) ။ တစ်ဦးကကောလိပ်မှသာလစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံကျောင်းရဲ့အားသာချက်၏တိကျခိုင်မာစွာအကဲဖြတ်ပြီးနောက်ဖိ Beta ကို Kappa တစ်မျြးအခနျးကွီးချီးမြှင့်သည်။ ဖိ Beta ကို Kappa တစ်မျြးအခနျးကွီးနဲ့ကောလိပ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ငွေများ၏အားသာချက်များအများအပြားနေသောခေါင်းစဉ်:
phi Beta ကို Kappa ကောလိပ်များကောင်းပြီလေးစားမှုရှိပါတယ်
အယ်လ်မီရာကောလိပ်မှာဖိ Beta ကို Kappa induction အခမ်းအနား။ အယ်လ်မီရာကောလိပ် / Flickr ကို
ကောလိပ်များသာ 10 ရာခိုင်နှုန်းတစ်နိုင်ငံလုံးဖိ Beta ကို Kappa တစ်မျြးအခနျးကွီးရှိသည်, တစ်ဦးအခနျးကွီး၏တည်ရှိမှုအတွက်ကျောင်းလစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံများတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်တိကျခိုင်မာစွာအစီအစဉ်များရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းဝင် Highly ရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည်
တစ်ဦးကျအခနျးနှင့်အတူကောလိပ်များမှာကျောင်းသားအကြမ်းဖျင်း 10% ဖိ Beta ကို Kappa join ။ တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုကျောင်းသားတစ်ဦးဟာလူမှုရေး, လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံလေ့လာမှုတစ်ခုအမြင့်ဆုံး GPA နှင့်သက်သေအတိမ်အနက်နှင့်အနံရှိပြီးမှသာလြှငျတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးတစ်ဦးအနေနဲ့ A- တဝိုက်တန်းအမှတ်ပျှမ်းမျှသို့မဟုတ်မြင့်မားသော, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဆိုပါနိဒါန်းအဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အဓိကနှစ်ဆတစ်ခုတည်းကိုအဓိက (ဥပမာ, အသေးစား, ကျော်လွန်. သွားလေ့လာမှုတစ်ခုအနံရှိရမည်, ဝန်ခံခံရဖို့, ဒါမှမဟုတ် နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သိသာထင်ရှားသောသင်ခန်းစာ။ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းဇာတ်ကောင်စစ်ဆေးမှုများရှောက်သွားဖို့လိုပါတယ်, သူတို့ရဲ့ကောလိပ်မှာစည်းကမ်း infractions နှင့်အတူကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမကြာခဏအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအပေါ်ဖိ Beta ကို Kappa စာရင်းပြုစုနိုင်ဖြစ်ခြင်းပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်ထင်ဟပ်။
ဖိ Beta ကို Kappa အတွက်အသင်းဝင်သင်ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်, တွမ် Brokaw, ဂျက်ဖ်ဘီဇို့, Susan Sontag, Glenn Close ကို, ဂျော့ခ်ျ Stephanopoulos နှင့်ဘီလ်ကလင်တန်နှင့်တူကျော်ကြား High-အောင်မြင်မှုရရှိကဲ့သို့တူညီသောအဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေကိုဆိုလိုသည်။ ဖိ Beta ကို Kappa က်ဘ်ဆိုဒ် 17 အမေရိကန်သမ္မတ, 39 တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးများနှင့် 130 ကျော်နိုဘယ်ဆုရှင်ဖိ Beta ကို Kappa အဖွဲ့ဝင်များခဲ့ကြပြီ။ မှတ်ချက်ပြု
ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်မကြာသေးမီကဘွဲ့ရဘို့, ဖိ Beta ကို Kappa ၏ networking အလားအလာလျှော့တွက်မဖြစ်သင့်။ တစ်နိုင်ငံလုံး 500,000 ကျော်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ, ဖိ Beta ကို Kappa အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးအောင်မြင်သောနှင့်အသိဉာဏ်လူတွေကိုရန်သင့်အားဆက်သွယ်။ ဒါ့အပြင်များစွာသောအသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးမျိုးအသက်အရွယ်နှင့်နောက်ခံလူများနှင့်အဆက်အသွယ်သို့တဖန်ဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုဖိ Beta ကို Kappa အသင်းအဖွဲ့များရှိသည်။ ဖိ Beta ကို Kappa ၌သင်တို့၏အသင်းဝင်ဘဝအဘို့ဖြစ်၏ကတည်းကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၏အားသာချက်များကိုသင့်ရဲ့ကောလိပ်နှစ်နှင့်ပထမဦးဆုံးအလုပ်ထက်ကျော်လွန်ကောင်းစွာသွားပါ။
phi Beta ကို Kappa ဟာလစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံကိုထောကျပံ့ဖို့မြောက်မြားစွာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆုကူညီပံ့ပိုး။ ဖိ Beta ကို Kappa မှအသင်းဝင်အခွန်အခနှင့်လက်ဆောင်များ lectureships, ပညာသင်ဆုနှင့်လူမှုရေးအတွက်ထူးချွန်ချန်ပီယံကြောင်းဝန်ဆောင်မှုဆု, လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပအသုံးပြုကြသည်။ ဖိ Beta ကို Kappa သင်တို့အဘို့များစွာသောအခွင့်အရေးပေးနိုငျစဉ်ဒီတော့အဖွဲ့ဝင်လည်းတိုင်းပြည်အတွင်းအဆိုပါလစ်ဘရယ်အနုပညာအနာဂတ်နှင့်သိပ္ပံထောက်ပံ့နေသည်။
ဖိ Beta ကို Kappa အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းဂုဏ်အသရေလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြာနှင့်အပန်းရောင်ကြိုးများနှင့်သင်သည်သင်၏ကောလိပ်ကျောင်းဆင်းပွဲ regalia ကုန်းပတ်ထွက်ကိုကူညီအသုံးပွုနိုငျကွောငျး PBK key ကို pin ကိုလက်ခံရရှိသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား Los Angeles မြို့ဓာတ်ပုံခရီးစဉ်တက္ကသိုလ်
ဓာတုဗေဒ Glassware အမည်များနှင့်အသုံးပြုခြင်း
ဂစ်တာအပေါ်လွယ်ကူသော Alt ရော့ခ်သီချင်းများ
ယေရှု၏7နောက်ဆုံးစကား
သင်ကနက္ခတ်ဗေဒင်အတွက် Fixed လက္ခဏာတွေအကြောင်းသိထားသင့်အဘယျသို့
ထိပ်တန်း7Adobe ကရုပ်ပုံစာအုပ်များ
တစ်ဘား Mitzvah5လက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များ
Cyberstalking နှင့်အင်တာနက်နှောက်ယှက်ခြင်း - ထိုအခါနှင့် Now ကို
လူမှုရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်တိုင်ပင်? ငါဘယ်ဒီဂရီ Choose သငျ့သလော
အဘယ်အရာ # * & Amp; + ?! သုတေသနစကားကြိနျဆိုဘို့ဦးစားပေးမှုဒေသဆိုင်ရာ Is ရှာပြီး
အီတလီ reflex ကြိယာ
အဆိုပါ Permian-Triassic Extinction